जापानमा संचालित नेपाली स्कुलको नयाँ भवन उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
४ भाद्र २०७५, सोमबार १५:०८ August 20, 2018 Purna Chalaune
जापानमा नेपालीहरुको सामुहिक लगानीमा संचालित एभरेष्ट इन्टरनेशनल स्कुलको नयाँ भवनको आइतबार बिधिवत उद्घाटन गरिएको छ ।
जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणा, सुगिनामी सिटीका मेयर र्‍यो तानाका, एन आर एन एशिया प्याशिफ़िक क्षेत्रिय संयोजक किरणबिक्रम थापा, स्कुलका अध्यक्ष डा. भूपालमान श्रेष्ठ, संचालक समितिका कार्यकारी सदस्य मेघराज नेपाल लगायतले संयुक्तरुपमा रिवन काटी भवनको उद्घाटन गर्नुभएको हो।
समारोहको अन्तमा उपस्थितहरुलाई धन्यबाद तथा समापन मन्तब्य राख्दै समारोहका सभापति तथा स्कुलका अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले यो स्कुल बिदेशमै एकमात्र नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार पढाई हुने स्कुल भएकोले यसलाई नमुना स्कुलको रुपमा बिकास गर्ने दृढता ब्यक्त गर्नुभयो । साथै उहांले जापानमा नेपाली भाषा संस्कृति प्रवर्धनमा पनि यो स्कुलको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरिय शिक्षामा पनि ध्यान दिंदै आगामी दिनमा अघि बढने बिचार ब्यक्त गर्नुभयो । उद्घाटन समारोहको संचालन एभरेष्ट स्कुलका संचालक समिति सदस्य सुजाता श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो ।
सोही अवसरमा नेपाल र नेपाली चिनाउने प्रदर्शनी तथा स्कुलका बिद्यार्थीहरुको चित्रकला पनि प्रदर्शनी गरिएको थियो ।
स्मरण रहोस, गत नोभेम्बरमा करिब ३५ करोडको लगानीमा एभरेष्ट स्कुलले आफ़्नो नयाँ भवन खरिद गरेको थियो । सो स्कुलमा हाल नर्सरीदेखि कक्षा ८ सम्मका २ सय ५ जना बिद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् ।
प्राचिन दक्षिण कोलियग्राम येंगा हिटी ढुंगेधारा संरक्षणमा पहल रहन्छ-उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ